Iiholide zaseDionsian | Ukuhamba kwe-Absolut
IGrisi eyiAbsolut | | Ihlaziywe 12/07/2018 15:27 | EGrisi
AmaGrike ayesenza amatheko amnandi xa isivuno siqala naxa siphela, ebuza kwaye ebulela kwizithixo. Intoni UDionysus Wayengunyana wothixo kunye nomntu ofayo, unguthixo wenzala, isivuno seediliya, utyani, njalo njalo, uthixo wewayini. Kwi Amatheko e-dionsian bahamba nge-polis emotweni enemifanekiso ye-Dionisios, abantu bamlandela, becula, bedanisa kwaye besela. Babulala inkunzi yebhokhwe ukuze igazi layo liqinise umhlaba (iirobhothi), yiyo loo nto igama intlekele nakwindlela ekuya kubonakala ngayo ukuvuma, kulifumana igama umdlalo ohlekisayo. Xa iikwayara zicula kwaye abanye bephendula, sele sinencoko kwaye yi-dithyramb, apha sele sifumene isiseko seqonga, abantu abenza kunye nabantu ababukeleyo. Phambi komntu, funda ibali, kuphela umlinganiswa owayekhona, ngoku umlingisi wayemele umlinganiswa.
U-Thespis wayengumdlali wokuqala, u-Aeschylus wasungula umdlali wesibini (deuteragonist), uSophocles umdlali wesithathu (triagonist), ngamanye amaxesha u-Euripides ubeka umdlali wesine. Ekuqaleni ikwayari ibaluleke kakhulu, emva koko iyaphulukana nayo.
Inezinto ezintle, abadlali, ikwayara, iimpahla, iiseti, ukhuphiswano, iqonga lezemidlalo. Imaski enxitywe ngabadlali ibaluleke kakhulu, enobukhulu obukhulu kunye nemibala, ukuze babonwe nakude. Kancinci umzi-mveliso wemaski ubaluleke kakhulu. Iikototini zanikezela ukuphakama okukhulu kumlinganiswa ukuze umdlali abe nomtsalane ngakumbi. Iimpahla zazinde zinde okanye zimfutshane, okanye zazinxitywe njengabantu, iipads zazinxitywa ukuqaqambisa imilo kwaye zihambelana nokuphakama kunye nemaski. Ukuhonjiswa akuzange kunikwe ukubaluleka, kamva kwacocwa.
I-acoustics yayigqibelele, kumqolo wangaphambili nakumqolo wokugqibela. Bayakha kwindawo evulekileyo, kwithambeka ukubeka iithambeka kwithambeka, zacwangciswa zimilo ezijikelezayo.
Iintlobo zemidlalo yeqonga yayi, intlekele, umdlalo ohlekisayo, umdlalo weqonga. Indawo yemidlalo yeqonga ityetyiswe ngezinto zangoku ezinje ngokukhanyisa kunye nezinye izixhobo, kodwa iseneengcambu ezifanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Imibhiyozo yaseDionsian
Khandiqonde!! Ngubani ondicacisayo
lesera andiqondi naaa ken uyandifundisa ???????????
IOROLAICHT KUNYE IACALAICHTT ... IPICHUTT sitsho
OKANYE NDIYAQONDA NAAADA !!! IPHEPHA LAKHO NDINIKE AMAGciwane! YINTONI ICULIAO !!! : /
Phendula IOROLAICHT KUNYE IACALAICHTT ... PICHUTT
Uhlobo olukhulu kunye nobuhle beentaka eNorway
Uhola wendlela omkhulu wolwandle